Madaxweyne Farmaajo”Cid Maalgashi Sameyn Karto Ma Jirto iyadoo Fasax Ka Wadan Dowladda Soomaaliya” -
[ December 15, 2018 ] Xog Cusub:Ilaalada La-taliyaha Gudoomiyaha Barlamanka Federalka Somaliya Oo Hubka Laga Dhigay	Wararka
[ December 15, 2018 ] Banaanbax Ka Socda Magaaladda Baydhabo Iyo Isgaarsiintii oo Hawada Laga Saaray	Wararka
[ December 15, 2018 ] Qarax Khasaare Dhimasho Dhaawac Geystay Oo Goordhaw Ka Dhacay Magaalada Buulaburte	Wararka
[ December 15, 2018 ] Markab Laga Leeyahay Dalka Hindiya Oo Qabtay Doon Siday Hub	Wararka
[ December 15, 2018 ] Midowga Afrika Oo Walaac Xoogan Ka muujiyay Soo Xiritaankii Rooboow	Wararka
HomeWararkaMadaxweyne Farmaajo”Cid Maalgashi Sameyn Karto Ma Jirto iyadoo Fasax Ka Wadan Dowladda Soomaaliya”
Madaxweyne Farmaajo”Cid Maalgashi Sameyn Karto Ma Jirto iyadoo Fasax Ka Wadan Dowladda Soomaaliya”
March 10, 2018 F.G Wararka 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan jirin cid maalgashi Dalka ka sameyn karta iyadoo aan fasax ama ogolaansho ka heysan Dowladda Fedaraalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in dalka shirkado iska maamushaan ama ay ka fuliyaan mashaariic aysan Ogeyn Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin wax kasta oo dhaawacayada Midnimada, Madaxbanaanida iyo Sharafta Shacabka Soomaaliyeed cid kasta oo isku daydana ay ka hor tagi doonaan.
Hadalkaan ayuu ka sheegay xafladda furitaanka Kal-fadhiga 3aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadalka Madaxweynaha ayaa u muuqda mid Jawaab ah heshiiskii dhawaan magaalada Abuu Dubia ay ku kala saxiixdeen Soomaaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka.
Sidoo kale hadalka Madaxweynaha ayaa jawaab u ah hadalo siyaasadeed oo heshiiskaas ka dambeeyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay hadda liidato dhinaca dhaqaalaha laakiin taas aysan micnaheeda ahayn in ay isdhiibtay,waxaana uu sheegay in Dadka Soomaaliya aysan ahayn dad jilicsan.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay markan tahay markii ay hoggaamin lahayd Urur Goboleedka IGAD oo uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in ay Soomaaliya ku guuleysato.
Xilka Xoghaya Urur Goboleedka IGAD waxaa Soomaaliya u sharraxan Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya C/Salaan Hadliye Cumar,iyada oo uu hadda Madaxweyne Farmaajo rajo wanaagsan ka muujiyay arrintaas.